Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Tadalafil - Buyaas
1. Inona no atao hoe vovony Tadalafil?
Tadalafil poids (171596-29-5) dia fanafody fanafody azo ampiasaina amin'ny endrika am-bava maro toy ny takelaka ary ny vovony. Ity zava-mahadomelina ity dia azo alaina amin'ny tsena misy anarana marika samihafa toa an'i Adcirca sy Cialis. Eo ihany koa ny tadalafil amin'ny endrika jeneraly. Na izany aza, tsy nanoro hevitra anao ny hampiasa ny vovobony tadalafil ankapobeny ianao satria mety tsy hanana ny tanjaky ny zava-mahadomelina tany am-boalohany; noho izany dia mila mitandrina ianao rehefa mividy ity fanafody ity toy ny tadalafil. Hamarino fa hividy ny tadalafil mety ianao amin'ny valiny tsara kokoa. Ny dokoteranao dia hitari-dalana anao momba ny fomba sy ny mividy vovony Tadalafil kalitao.
Tadalafil (171596-29-5) dia ampiasaina eo ambanin'ny marika marika samihafa mba hitsaboana ny toe-pahasalamana isan-karazany. Ohatra, ny Cialis dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny electile disfunction na impotence amin'ny lehilahy ary koa ny prostatic hypertrophy, izay matetika antsoina hoe prostate dia mihalehibe. Etsy an-danin'izany, Adcirca, izay marika tadalafil hafa ihany koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny hypertension arterial pulmonary. Adcirca ihany koa dia ampiasaina hanatsarana ny fahaiza-manao fanatanjahan-tena eo amin'ny lahy sy ny vavy mijaly amin'ny hypertension arterial pulmonary.
Ilaina hatrany ny maka an'io zava-mahadomelina io eo ambany fitarihan'ny dokoteranao mba tsy hisian'ny fiatraikany mahery vaika. Na inona na inona fomba azonao idirana mora ny vovony tadalafil dia aza maka izany raha tsy mandinika fitsabo. Noho ny fikarakarana ny zava-mahadomelina amin'ny sakaizanao dia tsy mandeha ho azy izay hanome valiny kalitao aminao. Tsy mitovy ny vatan'olombelona ary izay no antony tokony hanapahanao ny dokotera ny fatra mety ho anao rehefa avy nandinika ny toetry ny fahasalamanao ianao. Rehefa diso tafahoatra na diso tafahoatra ny tadalafil, dia mety hiteraka voka-dratsy mahery vaika izay mety hampivadika azy ary indraindray tsy azo ovana intsony.
2.Ahoana ny fiasan'ny vovoka Tadalafil?
Ny vovobony Tadalafil dia anisan'ireo fanafody izay ananan'ny kilasy fanafody fantatra amin'ny anarana hoe inhibitor 5 (PDE5). Ireo fanafody rehetra ao amin'ity kilasy ity dia miasa mitovy ary ampiasain'ny medika hitsaboana ny toe-pahasalamana mitovy. Matetika, ny zava-mahadomelina dia voasokajy amin'ny vondrona samihafa izay nantsoina hoe kilasy. Ny vondrona dia ahitana zava-mahadomelina amin'ny fananana mitovy ary miasa toy izany koa. Tadalafil dia manampy amin'ny fialam-boly amin'ny hozatra sy ny hozatry ny prostate, izay manatsara ny fitrandrahana homena hyperplasia (BPH) benigne misy anao; fanaintainana mandritra ny fangirifiriana, fikorontanana amin'ny fahasahiranana ary maika maika na mila urinate matetika.
Mampitombo ny fikorianan-drà ao anaty penis ny zava-mahadomelina, izay mifanampy amin'ny fahazoana sy fitandremana ihany koa. Tadalafil dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny famoronana erectile ao amin'ny lehilahy, fa manampy anao ihany izy rehefa mahazo firaisana ara-nofo. Ny fihetsehana penal dia mitranga rehefa feno ra ny zina. Ny fananganana dia mitranga aorian'ny fisian'ny lalan-drà tompon'antoka amin'ny famatsian-dra ary mampivoatra ny famatsiana ny ra raha toa kosa ireo izay manana andraikitra amin'ny fanesorana ny ra amin'ny fifanarahana amin'ny penis. Rehefa miakatra ao amin'ny penis ny ra, dia mitarika ny fihetsehana. Ny fandalinana dia naneho ny tadalafil fa mampitombo ny fahafaha-manao fatratra sy maharitra maharitra ho an'ny ankamaroan'ny lehilahy manana fantsilana erectile.
Ho an'ny PAH, io fanafody io dia mampiadana ny lalan-drà ao amin'ny havokanao hampitombo ny fandatsahan-dra, izay manatsara ny fahaizanao manao fanatanjahan-tena. Rehefa mandray an'io zava-mahadomelina io ianao, dia hanana hery ampy hiasanao mandritra ny ora maro ary hahatratra ny tanjonao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
3.Ahoana no maka ny vovony Tadalafil?
Torohevitry ny fanafody fa tokony handray vovony tadalafil farafahakeliny 30 minitra ianao alohan'ny hirotsahanao amin'ny firaisana ara-nofo. Ho ilaina ny fanafody rehefa mitondra azy io na tsy misy sakafo. Tokony tsy hitondra tadalafil fotsiny ianao rehefa te hanao firaisana. Ho an'ny lehilahy izay te-hanana firaisana ara-nofo mihoatra ny intelo na mihoatra ao anatin'ny herinandro, dia afaka mandeha ho an'ny fatra isan'andro, izay tonga amin'ny fatra roa, 2.5mg ary 5mg. Ny fatra raisina isan'andro dia 10mg, fa rehefa tsy ampy anao izany, ny fanafody anao dia afaka mampitombo ny fatra amin'ny 20mg. Manontania hevitra amin'ny dokotera alohan'ny hanovanao ny fatra hialana amin'ny voka-dratsin'ny tadalafil mandroso.
Tadalafil dia tokony alaina isaky ny ora 24. Rehefa tsy azonao ny fanantenanao, aza manampy dosage hafa ao anatin'ny andro iray. Tena mahazatra ny mpampiasa tadalafil voalohany amin'ny fanandramana amin'ny fahatongavana ny valiny tadiavina. Samihafa ny vatan'olombelona, ​​araka ny voalaza tetsy aloha tamin'ity lahatsoratra ity. Ny olona sasany dia mety mahatsapa ny valin'ny vovony tadalafil ao anatin'ny vanim-potoana 30 minitra mandritra ny faharetan'ny sasany. Na izany aza, ny dokotera dia nanoro hevitra fa handray ny fatran'ny zava-mahadomelina mandritra ny valo andro eo alohan'ny hanapahanao hevitra hanangona fatra avo kokoa na safidy fitsaboana hafa.
Tsy tokony hisotro vovobony tadalafil miaraka amina zava-mahadomelina na menaka hafa ety ianao. Noho izany, ampahafantaro ny dokotera anao raha mihinana fanafody ED hafa alohan'ny hanombohanao ny fatran'ny tadalafil anao. Na dia misy safidy tadalafil isan-karazany eny an-tsena, toy ny sildenafil, Viagra, Spedra, ary Cialis, dia tsy tokony hampidi-doza ianao raha hitondra tadalafil azy ireo; mety hitarika fiantraikany ratsy izany. Makà iray ihany fa isaky ny torohevitry ny dokotera. Ankoatr'izay, raha maka otrikaretina nitratsa ianao amin'ny fitsaboana ny aretim-po na fanaintainan'ny tratrany toy ny isosorbide dinitrate, nitroglycerin, isosorbide mononitrate, ary zava-mahadomelina fialamboly toy ny poppers, dia aroso ihany koa ianao mba tsy hisaraka maka vovony tadalafil. Ny fampifangaroana tadalafil amin'ny zava-mahadomelina nitratsa mety hiteraka fihenan'ny rà.
Miankina amin'ny mpitsabo anao, ampahafantaro ny dokotera ny fanafody rehetra entinao na raha toa ka voan'ny fitsaboana ianao, alohan'ny hanombohan'ny fitsaboana anao. Raha sendra misy fanaintainana maharary ianao, na maharitra ela ny fivoahana noho ny ora 4 dia ampahafantaro azy avy hatrany ny fanafodinao. Mety hanimba ny hozatrao ny fihetsehana maharitra. Ary koa, raha toa ianao ka mahazaka ny tadalafil dia aza atahorana ny haka azy ary ampahafantaro ny dokotera anao fa mila safidy azo antoka kokoa ianao. Tadalafil dia zava-mahadomelina be dia be ho an'ny fraody Erectile, fa tokony hitandrina be dia be izy ireo hisorohana ny fiantraikany mivoatra. Mifikira amin'ny fatra voatondro mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
4.Ampiasaina ny vovony Tadalafil
Matetika ny vovo-dronono tadalafil dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ireo olana amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny lahy sy ny vavy toy ny impotence sy ny fika erectile. Ankoatra ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny firaisana ara-nofo, ny tadalafil dia manatsara ny fikorianan'ny ra ao amin'ny penis ihany koa mba hanampiana ilay lehilahy sy ny hihazonana ny fikoranana mafy mandritra ny fotoana maharitra kokoa. Ity zava-mahadomelina ity dia fantatra amin'ny fanampiana ny lehilahy amin'ny fananana traikefa maharitra. Ny mpampiasa Tadalafil dia mankafy ny fanamboarana mafy sy lava kokoa. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia tokony halaina indray mandeha isan'andro ary 30 minitra alohan'ny firaisana.
Amin'ny lafiny iray koa, ny vovony tadalafil dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny soritr'aretina hipetrose hipplasia (BPH) koa. Ny fanafody dia manala ireo soritr'aretina BPH toy ny renirano malemy, sarotra amin'ny fanombohana ny fikorontanan'ny urine, ary matetika mandrehitra, indrindra fa amin'ny atoandro. Eto dia manampy anao i Tadalafil amin'ny alàlan'ny fialana sasatra amin'ny hozatra sy ny hozatry ny prostate. Na izany aza, aza mividy sy manomboka mampiasa vovobony tadalafil na dia mahatsapa ny soritr'aretina BPH alohan'ny hanaovana fizahana ny fitsaboana aza. Aza adino fa ny zava-mahadomelina dia tokony hapetraky ny mpitsabo amin'ny fotoana rehetra.
Ny dokotera koa dia manondro vovo-dronono tadalafil amin'ny olona manana hypertension arterial pulmonary (PAH). Io toe-javatra io izay misy tosidra avo be ao anaty lalan-tsofinao izay mitondra rà mankany amin'ny havokavoka, ary mitondra any amin'ny aretim-bavony, fahatsiarovana mamontsina ary reraka. Betsaka ny olona mijaly noho io toe-javatra io no manasarotra ny fanazaran-tena tsy tapaka. Na izany aza, ny vaovao tsara dia ny vovony tadalafil dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana ny marary PAH amin'ny fanatanterahana ny asany amin'ny fomba tsara amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vokan'ny fepetra eo amin'ny vatana.
Tsy hiaro anao amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo ihany koa ny tadalafil, anisan'izany ny hepatitis B, VIH, syphilis ary gonorrhea. Amin'ny lafiny rehetra, alao antoka fa manana firaisana ara-nofo azo antoka sy arovana ianao amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy azonao antoka momba ny fomba hiarovanao ny tenanao mandritra ny firaisana ianao, dia afaka mampiasa fimailo latinina. Raha mila fanazavana fanampiny, manatona ny pharmacist na ny dokotera anao.
5.Dada vovoka Tadalafil
Ny fatran'ny Tadalafil dia mety miovaova amin'ny mpampiasa iray mankany amin'ny iray hafa, arakaraka ny anton'ny fampiasana azy. Ny toe-pahasalamanao sy ny fomba fandraisan'ny vatanao ny zava-mahadomelina dia hisy fiantraikany amin'ny dosie anao. Na izany aza dia tsara foana ny hanombohanao amin'ny fatra sahaza ambany, izay azo ampitomboina aorian'ny dokoteranao rehefa avy mandinika ny fivoaran'ny fanafody. Aza atao mihitsy ny manitsy ny fatra raha tsy mampahafantatra ny mpitsabo anao raha miteraka voka-dratsy mahery vaika na tsy mahavita ny valiny andrasana. Dosage vovoka Tadalafil dia toy izao manaraka izao;
Fototra Dysfunction Erectile lehibe
Ity fatran'ny tadalafil vovony ity dia natao ho an'ny lehilahy manana fahasahiranana amin'ny fahazoana sy fikolokoloana mafy. Ny fatra voalohany natokana dia 10mg izay tokony alaina am-bava indray mandeha isan'andro na 30 minitra alohan'ny hidirany amin'ny firaisana ara-nofo. Raha tsy mahatsapa ny valiny ianao dia tokony hanohy ny dosie efa mahazatra ka hatramin'ny valo andro, dia avy eo mitsidika ny dokotera anao hanitsy ny fatrany. Ny olona sasany dia mahatsapa ny fahatarana amin'ny fahazoana ny valiny, indrindra ireo mpampiasa voalohany tadalafil. Na izany aza, ny fatra dia azo ampitomboina amin'ny 20mg isan'andro. Ny fikojakojana ny fatra vita amin'ny tadalafil dia misy avy amin'ny 5 ka 20mgs izay tokony alaina indray mandeha isan'andro raha ilaina izany na alohan'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny Tadalafil ho an'ny fatra an'ny ED dia miankina amin'ny fandeferana sy ny fahombiazan'ny tsirairay. Ny dosage dia azo ahena kokoa ho an'ireo mpampiasa mahatsapa fiantraikany mandroso na dia aorian'ny fisotroana ny fatra farany ambany indrindra amin'ny 10mgs isan'andro.
Ho an'ny fampiasana vovobony tadalafil isan'andro, ny fatra voalohany am-bava isan'andro isan'andro dia 2.5mg ary tokony atao mitovy isan'andro isan'andro, tsy mandinika ny fotoana fanaovana firaisana ara-nofo. Ity fatra ity dia natao ho an'ireo mpampiasa izay te hanao firaisana in-telo na mihoatra isan-kerinandro. Eto, ny dosage fikojakojana dia manodidina ny 2.5 ka 5mgs isan'andro ary tokony alaina am-bava indray mandeha isaky ny ora 24.
Ny fatran'ny Tadalafil vovony ho an'ny Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) ary ny fitrandrahana erectile (ED)
Azonao atao ihany koa ny mitondra tadalafil hitsaboana fepetra roa indray mandeha, izay mety ho vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa. Ho an'ny fikarakarana mahomby amin'ny ED sy BPH, ny fatra natokana dia ny 5mg dosie isan'andro, izay tokony ho raisina am-bava amin'ny fotoana mitovy. Eto, tsy mila mandinika ny filana ara-nofo ianao fa mifikitra fotsiny amin'ny torolàlana mety hahatratrarana ireo valiny irina. Raiso ny fatrao mandra-panoroan'ny dokoteranao anao hijanona aorian'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny fanafody anao.
Tadalafil vovony Totofil pulmonary Dosis
Ho an'ny fikarakarana mahomby momba ny Hetsika Hipolo, dia mila maka vovony tadalafil 40mgs indray mandeha isan'andro ianao. Tsy tokony hampisaraka ny dosie 40mgs ao anatin'ny iray andro ianao na hampiakatra na hampihenana ny fatra.
Dosage tadalafil ho an'ny olon-dehibe ho an'ny Benign Prostatic Hyperplasia
Ho an'ny fitsaboana BPH, tokony handray fatra XMUMXmgs oral tadalafil in-dray indray isan'andro ary ho azo antoka fa haka azy io isan'andro isan'andro mandritra ny herinandro 5. Ny dokotera dia afaka mampitombo na mampihena ny fatra isan'andro miankina amin'ny ny fihetsiky ny vatanao amin'ny fatra mandritra ny herinandro vitsivitsy. Raha sendra misy voka-dratsy mandroso dia mifandraisa amin'ny mpitsabo anao alohan'ny fotoana hiharatsy.
6.Tadalafil vovony antsasaky ny fiainana
Tadalafil poids antsasak'aina mijanona ho mavitrika ao amin'ny vatanao mandritra ny ora 36 ora aorian'ny fisotroan-jaza. Izany no mahatonga ny tadalafil ho safidy tsara indrindra ho an'ny mpampiasa maro maniry ny hanatsara ny traikefany ara-nofo. Ny fahazoana dovia ho an'ny vovobony tadalafil isan'andro dia hanampy anao hiroborobo sy fananganana lava kokoa rehefa avy maka ny fatra mandritra ny telo na dimy andro amin'ny fampiasana voalohany. Ho an'ny lehilahy izay tsy mandray tsara ny fatrany avo dia mitaky fatra isan-karazany isan'andro Ny fatra isan'andro dia mety amin'ny fanolorana ny fanatsarana ny firaisana ara-nofo.
Tsiahivina foana fa maka fatran'ny tadalafil fatra indray mandeha isan'andro ianao ary raha tsy mahazo ny valiny dia tsy hanao dosie hafa ao anatin'ny ora 24. Ny valin'ny vovony Tadalafil dia mety ho tara ny mpampiasa sasany, saingy tsy midika izany fa tokony hanao fatra fanampiny ianao ao anatin'ny andro iray. Ireo mpampiasa vovo-jaza tadalafil voalohany dia mety hisedra fahatarana sasany, nefa rehefa tonga ny fotoana dia namboarina ireo fananganana notadiavina.
7.Ny voka-dratsin'ny vovony Tadalafil
Raha ny vovony tadalafil dia zava-mahadomelina mahery vaika izay nanampy ny olona tsirairay amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana samihafa, raha toa ka misy diso tafahoatra na overdosed dia mety hamoaka anao amin'ny fiantraikany amin'ny lafiny sasany. Ny ankamaroan'ny tadalafil powder effects dia noho ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy sy ny fomba fihetsiky ny vatanao amin'ny zava-mahadomelina. Matetika ny olona sasany dia mety tsy hahita ny tombontsoan'ny zava-mahadomelina na dia aorian'ny fisotroan-drà mety. Ny mpampiasa sasany dia mety mahatsapa fiantraikany bebe kokoa noho ny hafa. Ny lafiny sasany amin'ny tadalafil mahazatra dia mety hanjavona amin'ny fotoana, ary ireto manaraka ireto;
Ny aretin'andoha dia tena fahita rehefa mandray ny vovon-dranon'i tadalafil. Mety hitranga koa ny fanaintainan'ny aretim-po, tsy fahampiana, mie, mitsoka, fivalanana, ary kohaka. Ny fanaintainan'ny lamosinao, ny kibonao, ny tongotrao, ny sandrinao koa dia mahazatra amin'ny mpampiasa tadalafil maro. Raha ny voalaza, dia tokony hanjavona vetivety ireo vokatra ireo, fa raha toa ka mijanona ela kokoa noho ny nanantena izy dia ampahafantaro ny dokotera anao hanampy anao hahita vahaolana. Ny vaovao tsara dia saika azo fehezina avokoa ireo lafiny rehetra amin'ny tadalafil ireo.
Misy ihany koa ny fiatraikany ratsy izay tokony hitadiavanao mpitsabo haingana dia manomboka manomboka azy ireo ianao;
Fahafoizan'ny fahitana na fahitana mipoaka rehefa maka tadalafil. Ny mpampiasa sasany dia mety hanomboka fahasarotana amin'ny fahitany raha vao manomboka mitondra an'io zava-mahadomelina io izy ireo, ary rehefa mitranga izany, antsoy ny dokotera ao anatin'ny fotoana fohy indrindra.
Izay fiovana amin'ny fahitana loko ihany koa dia tokony haterina avy hatrany amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra na ny fitsaboana anao. Ny mpampiasa sasany dia mety hanana olana amin'ny famaritana loko sasany, toy ny filazana ny fahasamihafana eo amin'ny maitso sy ny manga.
Ny olana amin'ny fihainoana, ny faneno amin'ny sofina, ny fatiantoka ary ny fihenan'ny fihainoana dia vokatry ny fiatraikany ratsy hafa koa izay mety hitranga.
Fivoarana maharitra maharitra mandritra ny ora 4.
Ny fanaintainan'ny tratrany sy ny aretin-doha, ny hoditry ny hoditra na ny lela, ny rà, ny lela, ny maso, ny molotra, ary ny tarehy.
Ny fahasahiranana amin'ny mitelina na ny fofonaina dia tokony hojerena avy hatrany.
Ny tsy fampahafantarana amin'ny dokotera anao momba ny fiantraikany ambony eo ambony dia mety mitarika tsy hiovaova ary mety hitarika ho amin'ny fahafatesana. Aza misalasala mifandray amin'ireo matihanina mpitsabo raha sendra ny vokatr'izany. Mitovy amin'izany ihany, aza manohy fatrany fa tsy mampahafantatra ny medikinao satria mety hiteraka fitarainana bebe kokoa na hiharatsy ny toe-pahasalamanao. Azo ampiharina ny lafiny rehetra amin'ny tadalafil, ary hanoro hevitra anao ny dokotera rehefa avy nandinika ny toe-javatra misy anao.
Tadalafil poids amidy azo alaina eny an-tsena na amin'ny fivarotana an-tserasera na amin'ny fivarotam-panafody ara-batana. Na izany aza, mety hahita azy ianao eo ambanin'ny anarana marika samihafa toa an'i Cialis na Adcirca, miankina amin'ny toerana misy anao. Ity zava-mahadomelina fanafody ara-dalàna amin'ny faritra maro, ary tsy tokony hatahotra ianao rehefa manana, mividy, na manafatra ny zava-mahadomelina. Tany Etazonia, Tadalafil dia nekena voalohany tao 2003 ho an'ny fitsaboana malotilika erectile, ary nandritra ny taona maro dia voaporofon'ny fahombiazana izany. Ny vovony tadalafil dia misy gony isan-karazany miankina amin'ny habe ilainao amin'ny fitsaboana ny fahasalamanao.
Afaka amin'ny mividy vovony tadalafil amin'ny be dia be na ampy fotsiny amin'ny fampiasanao andro iray na andro vitsy dia miankina amin'ny fangatahan'ny dokotera anao. Betsaka ireo mpamatsy vovo-drongony tadalafil eny an-tsena ankehitriny, fa kosa azonao antoka fa maka izany amin'ny mpamokatra malaza sy mpivarotra ianao. Tsy ny mpivarotra rehetra hitan'ny tsena fa manana zava-mahadomelina tsara. Tsarovy, hahazoana vokatra tsara sy haingana; tokony mampiasa vovobony tadalafil kalitao foana ianao. Misy koa ny endrika bordon de tadalafil, izay mety tsy hananana toetra sasany ary mety tsy ho ampy tsara amin'ny fitsaboana anao.
Raha tsy fantatrao momba ny toerana sy ny fomba hahazoana vovony tadalafil kalitao ianao, dia aza matahotra ny hiresaka amin'ny mpitsabo anao. Ny matihanina mpitsabo no olona tsara indrindra mba hampiseho aminao ny toerana hahazoana ireo fanafody voatondro anao. Na izany aza, dia tsara foana ny manao ny fikarohana ataonao hahalalanao ny mpamokatra tadalafil sy ny mpamatsy vovony tsara indrindra. Ataovy azo antoka fa mividy vovo-drindrina tadalafil feno ianao, hanamora ny hanitanao azy rehefa tohizanao ny fatrao.
9.Aiza hividy vovony Tadalafil?
Niova izao tontolo izao ary tsy toy ny andro vitsivitsy niverenanao, azonao atao mividy tadalafila an-tserasera amin'ny tranokalanay ary raiso ny vokatrao ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Azonao atao ny miditra amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny telefaona finday, tablette, na solosaina ary manao ny baikonao amin'ny fampiononana ny tranonao na ny birao. Raha tsy izany dia mbola afaka mahazo vovony tadalafil avy amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana ianao. Na izany aza, manoro hevitra hatrany ny mpanjifanay mba hitandrina tsara isika rehefa mitady ny mpamatsy vovo-dronono tadalafil tsara indrindra amin'ny Internet na amin'ny lafiny ara-batana. Ny sasany amin'ireo mpivarotra zava-mahadomelina dia mety hanome tahiry ireo kalitao ambany izay tsy hahomby amin'ny famoahana valiny tadiavina na hiafara aminao amin'ny fiantraikany ratsy.
Ataovy ny fikarohana ataonao momba ilay orinasa akaiky ny hividianana vovona tadalafil hahafantaranao ny fomba fiasan'izy ireo. Ny fomba tsara indrindra dia ny fijerena ny laharan'ny orinasa sy ny hevitra momba ny mpanjifa. Ny orinasa malaza iray dia hanana valiny tsara sy salan'isa tsara. Mamaky traikefa momba ny mpanjifa samihafa ary manapa-kevitra momba izany. Ny mpanjifa sambatra dia hanoro hatrany ny mpanjifa hafa amin'ny mpamatsy, ary ireo tsy diso fanantenana dia tsy hatahotra ny haneho ny fahadisoam-panantenany. Aza maika rehefa mividy vovony tadalafil, mandany fotoana ary mandalina ny mpamatsy sy ireo mpanamboatra eny an-tsena. Afaka manampy anao koa ny dokotera amin'ny famantarana ny mpivarotra tadalafil tsara indrindra.
Izahay no mitarika tadalafil mpamatsy powd ao amin'ny faritra, ary efa nanatrika ny lalao nandritra ny taona maro isika izao. Manolotra vokatra ara-pitsaboana kalitao ho an'ny mpanjifantsika rehetra koa izahay ary manao fanaterana ara-potoana manerana an'izao tontolo izao. Ny tranonkalan'ny mpampiasa anay dia mamela anao hanao ny baikonao ao anatin'ny segondra sy amin'ny toerana rehetra. Afaka manamboatra mora foana ianao avy amin'ny vokatra iray mankany amin'ny iray hafa eo amin'ny tranokalanay. Ny vokatra ara-pitsaboana anay, toy ny vovony tadalafil dia nofenoina tsara mba hialana amin'ny fandotoana azy mandritra ny fitaterana ary koa manamora ny fizotranao ny fanafody. Na izany aza, manoro hevitra hatrany ireo mpanjifa mahatoky rehetra izahay, fa tsy ny hanomboka hamoaka zava-mahadomelina raha tsy misy fitsirihana ara-pitsaboana ary ahazoana fanafody sahaza azy avy amin'ny matihanina mpitsabo.
Ho an'ireo fanontaniana rehetra na ahiahy momba ny vovobony tadalafil, afaka mifandray aminay amin'ny fotoana rehetra ianao. Ny birao fikarakarana mpanjifa mahay dia hamaha ny olanao rehetra ary hanampy anao koa handefa baiko eo amin'ny lampihazo. Atsaharo amin'ny ankizy ny vovony ary alao amin'ny fatra tsara kokoa ny fatra natokana. Raha sendra misy vokatr'izany ianao, dia ampahafantaro ny dokotera anao torohevitra sy tari-dalana bebe kokoa.
10.Tadalafil vovoka vs vovoka Sildenafil Citrate
Ireo zava-mahadomelina roa ireo dia avy amin'ny phosphodiesterase-5 (PDE5), ary midika izany fa saika miasa toy izany koa izy ireo. Ny vovony tadalafil sy ny vovobony sildenafil citrate dia misy itovizany, ary ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fimailo sy ny famoahana erectile ao amin'ny lehilahy. Na izany aza, ny fanafody roa dia tsy misy afa-tsy ny vokatra rehefa mihetsika ny mpampiasa. Rehefa manaraka ny toromarika rehetra ianao, ny tadalafil sy ny vovoka sildenafil citrate dia afaka manampy anao hanana fahatsiarovana maharitra sy maharitra.
Raha resaka resaka fampiasa dia ny vovony tadalafil dia miasa ao anatin'ny 16 mankany 45 minitra aorian'ny fisalohan'ny dosage anao. Amin'ny lafiny iray, ny sildenafil dia manome valiny ao anatin'ny minitra 30, ary rehefa mihinana sakafo matavy ianao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina. Noho izany, ny vovony sildenafil citrate dia tokony halaina amin'ny kibo tsy misy valiny noho ny vokatra tsara kokoa. Saika ny fahombiazana PDE5 inhibitors dia mitovy. Saingy, na dia eo aza ny fahombiazan'ny sildenafil mijoro amin'ny 84% sy ny tadalafil amin'ny 81%, dia maro ny lehilahy maniry ny maka vovony tadalafil satria misy fiantraikany maharitra maharitra izany.
Ny vovony Tadalafil dia azo alaina rehefa ilaina na isan'andro. Matetika indrindra ny dosie tadalafil isan'andro dia kely kokoa noho ny fatra mila izany. Ohatra, ny 10mgs dia ny dosage tadalafil manomboka alohan'ny hetsika ara-nofo. Raha vao alaina dia haharitra mandritra ny ora 36 ny fiantraikany. Ny dokotera koa dia afaka mampitombo ny fatra amin'ny 20mg na mampihena izany amin'ny 5mg rehefa tsy mihetsika ny lafiny vokatr'izany. Ho an'ny fatra isan'andro, ny fatran'ny tadalafil vovony dia 2.5mg ho an'ny ED sy ny 50mg rehefa mitsabo BPH. Nomena torohevitra ihany koa ireo mpampiasa mba tsy hampitombo ny dosie tadalafil raha tsy toro-hevitra amin'ny dokotera hampihena ny fiatraikany.
Ny vovony sildenafil citrate dia tokony alaina isan'andro sy adiny iray alohan'ny handraisanao ny tenanao amin'ny fanaovana firaisana. Ny zava-mahadomelina dia tokony alaina amin'ny filana ilana azy, ary ny fatra natolony dia 50mgs, izay azonao atao ihany koa ny maka 30 minitra na efatra ora alohan'ny firaisana. Amin'ny tranga sasany, ny fatran'ny vovoka sildenafil citrate dia azo ampitomboina amin'ny 100mgs raha tsy mahavita mandefa ny vokatra irina ny fatra 50mg. Ny dokotera dia mety mampihena ny fatra amin'ny 25mgs raha sendra fiantraikany amin'ny lafiny tsy hay fehezina. Tahaka ny tadalafil, ny vovony sildenafil citrate dia tokony halaina indray mandeha isan'andro na dia tsy azonao ny valiny ao anatin'ny ora 4.
Ireo zava-mahadomelina roa, rehefa diso tafahoatra na diso tafahoatra, dia mety hitarika vokatra mitovitovy, toy ny fikapohana, aretin-doha, ary fampandemana. Na izany aza, ny fomba fijerin'ny loko dia mifandraika amin'ny vovoka sildenafil citrate. Ny vaovao tsara dia ny hoe ny lafiny rehetra amin'ny zava-mahadomelina roa dia azo fehezina raha mikatsaka fitsaboana ara-pitsaboana avy hatrany. Aza misalasala miresaka amin'ny dokotera na ny pharmacist anao raha te hahalala bebe kokoa momba ny tadalafil vovoka sy vovoka citrate sildenafil.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Fampivoarana vaovao vaovao misongadina amin'ny inhibitor phosphodiesterase-5 amin'ny aretina amin'ny aretim-po. Fanandramana sy kardinaly klinika, 16(4), e30.
Mostafa, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013). Vokatry ny tadalafil ambany-ambany mitaiza amin'ny tavy cavernous penile ao amin'ny voalavo amin'ny diabeta. Urology, 81(6), 1253-1260.
Kaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Ny fampitahana ny vokatry ny sildenafil sy ny tadalafil ary ny vardenafil amin'ny fitsaboana ny hoditra velona amin'ny voalavo. Gazety momba ny fandidiana plastika sy ny fandidiana tanana, 49(6), 358-362.
Porst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., & Viktrup, L. (2013). Ny fiantraikan'ny tadalafil amin'ny soritr'aretin'ny lalan-drà ambany faharoa amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny prostatic ary ny fitrandrahana erectile amin'ireo lehilahy mavitrika manana firaisana ara-nofo miaraka amin'ny fepetra roa: Fandinihana ireo angon-drakotra mifototra amin'ny fizaram-batana efatra mifototra, placebo ‐ fanadihadiana klinika tadalafil mifehy. Ny diarin'ny fanafody fanasitranana, 10(8), 2044-2052.